कलाकार भारती सिंहले ९१ किलोबाट कसरी पुर्‍याइन् ७६ किलो ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियकलाकार भारती सिंहले ९१ किलोबाट कसरी पुर्‍याइन् ७६ किलो ?
कलाकार भारती सिंहले ९१ किलोबाट कसरी पुर्‍याइन् ७६ किलो ?
एजेन्सी । भारतीय हास्य कलाकार भारती सिंहले १५ किलोग्राम घटाएकी छन्। उनले एक अन्तर्वातामा इन्टरमिटेन्ट फास्टिङबाट तौल घटाएको बताएकी छन् । आफूले घटाएको तौलबाट आफैलाई अचम्म लागेको उनले बताइन् ।
उनले भने, ‘मेरो तौल ९१ किलोबाट ७६ किलोसम्म पुग्यो। दम र मधुमेह पनि नियन्त्रणमा रहेको उनले बताएकी छन् । उनी इन्टरमिटेन्ट फास्टिङको पालन गररहेको उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, म बेलुका ७ बजेदेखि अर्को दिन १२ बजेसम्म केहि खाँदिन।’
तौल घटाउन र एक स्वस्थ जीवनशैली स्वस्थ रहनको लागि आवश्यक छ। तर धेरै पटक मानिसहरु तौल घटाउने खोजीमा यस्तो तरीका अपनाउँछन्, जसको कारण तौल घटाउनुको सट्टा, यो बढ्दै जान्छ वा यसको साइड इफेक्ट वा साइड इफेक्ट हुन थाल्छ।
जे होस् धेरै जसो मानिसहरुलाई उपवास, उपवास वा उपवासको बारेमा थाहा छ, तर इन्टरमिटेन्ट उपवासको मतलब केहि घण्टाको लागि खाना नखानु हो ।जोन हप्किन्स मेडिसिनका अनुसार, ‘धेरै आहारहरु के खाने र के नखानेमा निर्भर गर्दछ, तर आन्तरिक
उपवासले मानिसलाई कहिले खानु पर्छ भनेर बताउँछ? जोन हप्किन्स चिकित्सा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने एक संगठन हो। इन्टरमिटेन्टमा एक दिनमा मात्र केहि घण्टामा खान सकिन्छ । यसले बोसो कम गर्न मदत गर्छ ।